2016 ခုနှစ်တွင်နီကိုးလ်ပက်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သင်၏ "Brain On Porn" ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကို PornHelps ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်တွင်နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်“ PornHelps” ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်
သူမ၏အတွက် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဗြောင်ကျကျထောက်ခံမှု, Prause သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များပါဝင်သောအနည်းဆုံးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက် ၂ ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
2016 - PornHelps " ၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့် (@pornhelps) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအားပေးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင်ညစ်ညမ်းမှု၏“ အပြုသဘောဆောင်သော” အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအစီရင်ခံသည့်အပြင်ပြင်ပလေ့လာမှုများလည်းရှိသည်။ “ PornHelps” သည်နာတာရှည် Prause သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တူညီသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုနာတာရှည် တကယ်တော့၊ Prause ဟာသူမရဲ့ထင်ရှားတဲ့ alias PornHelps နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတွစ်တာနှင့်အခြားနေရာများတွင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုအခြားသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူတကွတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။ 1, 2, 3, 4) ။ @pornhelps တွစ်တာအကောင့်နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးသည် Prause တုန်းကရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည် အပြင်မှာ စိတ်ပညာယနေ့တွင် PornHelps အဖြစ်။
2019 - ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ချီးမွမ်း RealYBOP တွစ်တာ နှင့် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ထို့အပြင်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုတို့တွင်ပါ ၀ င်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Gabe NCOSE၊ Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူများ” လည်းပါ ၀ င်သည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္myာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမြှင့်ခြင်း (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အရှင်သခင်) RealYBOP တွစ်တာ) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာနှင့်ရန် RealYBOP Twitter ကိုအသုံးပြုသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (၎င်းသည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်လူကုန်ကူးမှုဗွီဒီယိုများကိုလွှင့်တင်ရန်ခေါ်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရခြင်း) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။
Quo Pro Quo?
Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမဆုတ်မနစ်ထောက်မပေးခြင်းသည်က Quid လိုလားသူပိုနေမြဲကျားနေမြဲတစ်ခုထက်ပိုပြီးလား၊ သေချာတာပေါ့, အများပြည်သူမျက်နှာသာလဲလှယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် လာသောအခါ 2015 ခုနှစ် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းလော်ဘီ) သည် Prause အကူအညီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးသူလက်ခံခဲ့သည်။ သူမသည် Prop 60 ကို (စက်မှုလုပ်ငန်းမလိုချင်သောညစ်ညမ်းကွန်ဒုံးများဖြင့်) တိုက်ခိုက်သည်။.
တစ်စက္ကန့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Quid လိုလားသူပိုနေမြဲကျားနေမြဲ 2016 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဂုဏ်ပြုခြင်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်ပိုက်ဆံတစ်ပုံး - ဝန်ပေးထားခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုပုံအောက်မှာ FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး). Orgasmic ဘာဝနာ, ကြောင်းတစ်ခု MLM Pseudo- အစွန်းရောက် ကြီးမားတဲ့နှစ်ကောင်အားသွင်း မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ ၀ တ္ထုကိုမည်သို့လေဖြတ်နိုင်သည်ကိုအမျိုးသားများအားသင်ပေးရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ၊ သို့သော် Clitoris-diddling လေ့လာမှု (OM) သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်သေချာသောဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည် - လိုချင်သောအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များကိုရှာဖွေခြင်း သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါပွတ် စက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုတေသီများကစောင့်ကြည့်နေစဉ်။ သူမ၏ OM စုံတွဲ ၂၅၀ ၏ပစ်မှတ်ကိုရောက်ရန် Prause ရှိနိုင်သည် ဘာသာရပ်အဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော်porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုကတဆင့် s အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ အဆိုပါ FSC ဖို့မျက်နှာသာ? ထို့နောက်နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် Prause ကသူမ၏လာမည့် OM လေ့လာမှု (ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်ဘာမှမပတ်သက်သည့်) ယခုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုလူသိရှင်ကြားစတင်ခဲ့သည် လည်း porn စွဲ debunk ။ ဒီအရေးအသား (ဇွန်လ, 2020) ၏အဖြစ် OM လေ့လာမှုပေါ်လာသေးသည် (ဒီနေရာမှာပိုပြီး).
“ PornHelps” အဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ပြန်သွား
2016 ခုနှစ်တွင်နီကိုးလ်ပရပ်စ်တွင်“ PornHelps” ဟုခေါ်သည့်အသုံးပြုသူအမည်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့် (@pornhelps) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအားပေးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ညစ်ညမ်း၏“ အပြုသဘောဆောင်သော” ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်ချယ်ရီရွေးကောက်နုတ်ချက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများရှိသည်။
နာမ်စား“ PornHelps” သည် Prause မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တူညီသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုပုံပျက်စေသည်။ တကယ်တော့၊ Prause ဟာသူမရဲ့ထင်ရှားတဲ့ alias PornHelps နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတွစ်တာနှင့်အခြားနေရာများတွင်တစ်ခြားသူများကိုအခြားသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ Prause / PornHelps ညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအချို့ကိုဤ Prause-စာမျက်နှာကဏ္sectionsများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
@pornhelps တွစ်တာအကောင့်နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Prause နှစ်ခုလုံးနောက်ကွယ်ရှိကြောင်းလူတိုင်းသိသွားသောအခါရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းက "PornHelps" ဆိုတာက Nicole Prause ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့်အောက်ပါ @pornhelps tweet ကသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
Krasey ကျောင်းမှ Prause ကသူ့ကိုယ်သူ ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဟုခေါ်သည် (သူမသည်အာရုံကြောသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိထားသည်မှာမသေချာသော်လည်း) နှင့် ၁၅ နှစ်ခန့်အကြာအထက်ပါ ၂၀၁၆ tweet ထက်ကောလိပ်ကိုစတင်ခဲ့ပုံရသည်။ အများအပြားတုံ့ပြန်မှုအတွက် ကြော်ငြာ hominem ဿုံ Prause ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမှတ်ချက်တွေအများအပြားထင်ဟပ်ထားတဲ့ "PornHelps" အားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု, "PornHelps" ၏မှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် https://www.psychologytoday.com/us/comment/887468#comment-887468: ဤနှင့်အခြားသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ
အထက်ပါ၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ စိတ်ပညာယနေ့တွင် အဆိုပါ PornHelps က်ဘ်ဆိုက်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့် Twitter အကောင့်တစ်ခုသဲလွန်စမပါဘဲပျောက်ကွယ် @pornhelps။ PornHelps မှကျန်ရှိသောအရာများသည်ဆိုဒ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်မှတ်ချက်တွေများလွန်းသည် ဒီစွန့်ပစ် Disqus accoun87 မှတ်ချက်များကို t ကို t ။ (စာမျက်နှာ ၈၀ ပါစာမျက်နှာမြောက်မြားစွာ Prause သည်ဂယ်ရီ Wilson အားအသရေဖျက်ရန်နှင့်နှောင့်ယှက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်).
PornHelps သည်အမှန်တကယ်ဂုဏ်ယူကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုလိုပါသလား။ အောက်ပါမှတ်ချက်များ၊ တွစ်တာများနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုများသည်ယင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ PornHelps Disqus အကောင့်သည် ၈၇ ကြိမ်တင်ထားသည်။
Prause ရဲ့နှောင့်ယှက်တပ်မဟာ၏ Prause, Stambaugh နှင့်3သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကတစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးမီညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုဤအပိုင်းကိုအတွင်းမှတ်တမ်းတင်သည်: မေလ 30, 2018 - Prause မဟုတ်မမှန်သိပ္ပံလိမ်လည်မှု FTND စွပ်စွဲဖြင့်, သူသည်နှစ်ကြိမ် FBI ကမှဂယ်ရီ Wilson ကဖော်ပြခဲ့သည်ပြီဆိုလို။ (Addendum: Gary Wilson သည်လွတ်လပ်စွာသတင်းအချက်အလက်တောင်းခံမှုကို FBI သို့တင်သွင်းခဲ့ပြီး FBI က Prause လိမ်နေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ Wilson အားအစီရင်ခံစာတင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ နိုဝင်ဘာလ 2018: FBI ကအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများပတျဝနျးကငျြနီကိုးလ် Prause ရဲ့လိမ်လည်မှုခိုင်မာသွား).
Prause အထက်ပါ Tweet လုပ်ခဲ့သောတချိန်တည်းမှာပင်, "PornHelps" ဟုအဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအတွက်ပို့စ်တင်စတင်ခဲ့သည် စက္ကူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော PornHelps ၏မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ PornHelps သည်သုတေသနနည်းစနစ်နှင့်ကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းမည်မျှလောက်သိသနည်း။ (Prause ၏ပါရဂူဘွဲ့သည် stats ၌ရှိခဲ့သည်။ )
Wilson ၏နောက်သို့လိုက်သော PornHelps သည် Prause ၏အသရေဖျက်မှုကိုထင်ဟပ်စေသောမှတ်ချက်များ (“ stalker”၊ “ massage therapist”,“ fake” စသည်ဖြင့်) ။
Prause ၏သားကောင်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်၊ Nicole Prause ရဲ့သားကောင် - ပါးပျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူအဆတွေဟာသူမကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။
Pornhelps သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ hack မှုအတွက်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အရာတစ်ခုကိုသိသည်။
တဖန် Prause သည် Wilson အား cyberstalker နှင့် massage therapist (အခြား chum David Ley) ဟုခေါ်ဆိုသည့်တစ်ခုတည်းသောမှတ်ချက်ပေးသူဖြစ်သည်။ Prause ၏သုံးသပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရား - Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)
အောက်ဖော်ပြပါများသည် PornHelps ၏ Prause op-ed အောက်မှမှတ်ချက် ၂၀ ကျော်အနက်အချို့ဖြစ်သည်။ Gary Wilson ပြီးနောက် Prause ၏နံပါတ် ၂ စွဲသည် FTND ဖြစ်ပြီး Prause သည်အကြိမ်များစွာတင်ခဲ့သည်။ ဤထင်မြင်ချက်များသည် Prause ၏တွစ်တာများသည်သုတေသနပြုမှုကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့် FTND ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ PornHelps“ ဆွေးနွေးချက်” အကောင့်သည်မှတ်ချက် ၈၇ ခုတင်ခဲ့သည်။
PornHelps သည်သြစတြေးလျားလေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Prause မှပုံမှန်ရေးသားခဲ့သည်။
Prause / PornHelps ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု (David Ley နှင့်အတူပူးပေါင်းနေစဉ်) Wilson အားတိုက်ခိုက်ခြင်း။ များစွာသောအခြားဥပမာများကိုဤစာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အများပြည်သူအတွက် Prause နှင့် Ley တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသည့်ဆောင်းပါးအများစုတွင်တစ်ခုတည်းသော "ကျွမ်းကျင်သူများ" ဖြစ်ပြီး၊ စစ်မှန်သောစွဲခြင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏အလုပ်များတည်ရှိသည်ကိုပင်အသိအမှတ်မပြုကြပါ။ ဒီအချိန်မဟုတ်ဘူး။ porn အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်သော fMRI လေ့လာမှုများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သောကမ္ဘာကျော် neuroscientists ၂ ဦး ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည် အချိန် ဆောင်းပါး။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆီးရောဂါပါရဂူအဖြစ် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူအများအပြားသည်လုလင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ, ရိုးရှင်းစွာထားပါ အချိန် ဆောင်းပါးသည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားဆောင်းပါးများထက် ပို၍ ဂရုတစိုက်လေ့လာခဲ့သည်၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာသည်အဖြစ်မှန်နှင့်လက်ရှိသိပ္ပံ (ထို့နောက်) အခြေအနေတို့ကိုပါရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ။ ပင် ပိုပြီးထောက်ခံမှု အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြားဖြစ်နိုင်သော link ကိုများအတွက် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေထဲကရောက်လေပြီ။
Belinda ၏အစောပိုင်းတွစ်တာ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ကိုတစ်နှစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတုန့်ပြန်မှုအရကျွန်ုပ်တို့ @pornhelps ရှိသည်။ tweeting အောက်ပါ:
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု: ဒါဟာလိမ်နေသော Prause နှင့် @Pornhelps ဖြစ်သည်။ လူအများသိရှိနိုင်သည့်အတိုင်း Luscombe သည် Gary Wilson၊ Gabe Deem၊ Alexander Rhodes, Noah Church, David Ley နှင့်အခြားသူများအားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမတိုင်မီတစ်နှစ်က အချိန် အဖုံးဇာတ်လမ်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Luscombe နှင့်အတော်ကြာ အချိန် မဂ္ဂဇင်းတကယ်တော့-Checker တစ်ခုချင်းစီကိုအငျတာဗြူးရဲ့တောင်းဆိုမှုများ corroborate မှတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ချီးမွမ်း မဟုတ်မမှန်မှအခိုင်အမာ အချိန် မဂ္ဂဇင်း Gabe Deem ဟာဆေးဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ (!) ရေးသားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ် Prause & Pfaus ၂၀၁၅ ၏ဤသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု (တကယ်တော့ဆေးဆရာဝန်တစ် ဦး / သုတေသီတစ် ဦး မှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်) ပို။ ပင်အံ့ ly စရာကောင်းလောက်အောင်, ရဲရငျ့စှာလိမ်ညာအချိန် UCLA သည်“ Richard A. Isenberg MD” ၏ဝေဖန်မှု (အယ်ဒီတာထံပေးစာ) သည်လူငယ်၏ကွန်ပျူတာသို့သွားခဲ့သည်။ Deem ကိုရှုတ်ချရန်ဤလွန်စွာကြိုးပမ်းမှုများသည်အထက်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
"PornHelps" tweets နှစ်ခုထက်ပိုသောမတည်မငြိမ်တုံ့ပြန်မှု (Update - @pornhelps သည်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့၏တွစ်တာအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ Prause သည်ဤအကောင့်နှင့်မကြာခဏတွစ်တာလုပ်ထားသည်မှာထင်ရှားလာသည်။ )